आर्थिक भूमण्डलीकरण: यो के हो, यसको फाइदा र बेफाइदा के छ अर्थव्यवस्था वित्त
एनकर्नी आर्कोया | | आर्थिक राजनीति
हालका बर्षहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लाग्ने अवधारणा मध्ये एक तथाकथित आर्थिक भूमण्डलीकरण हो। यो शब्द, जुन बुझ्न गाह्रो छैन, अर्थशास्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान मध्ये एक हो।
तर, आर्थिक भूमण्डलीकरण भनेको के हो? यसको कस्ता फाइदाहरू र बेफिकाहरू छन्? यो केको लागि हो?
1 आर्थिक भूमण्डलीकरण के हो
1.1 के आर्थिक भूमण्डलीकरण को विशेषता दिन्छ
2 आर्थिक भूमण्डलीकरणको फाइदा र हानि
2.1 आर्थिक भूमण्डलीकरणका फाइदाहरू
3 त्यसो त भूमण्डलीकरण राम्रो छ कि नराम्रो?
आर्थिक भूमण्डलीकरण के हो
हामी आर्थिक भूमण्डलीकरण को रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं "आर्थिक र वाणिज्यिक एकीकरण जुन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै देशहरू मार्फत हुन्छ र जसको उद्देश्य प्रत्येक देशको वस्तु र सेवाहरूको फाइदा लिनु हो।" अर्को शब्दमा, हामी कुरा गर्दैछौं देशहरूको क्षमता र उनीहरूको सामानहरू र सेवाहरू जोड्ने क्षमता र उनीहरू समावेश गर्ने देशहरू बीच आर्थिक र व्यापार नीतिहरू स्थापना गर्न।
यस तरिकाले,aसबै देशहरूको उच्च वृद्धि, तर धेरै पक्षहरूको जस्तै टेक्नोलोजी, संचार, आदि।
के आर्थिक भूमण्डलीकरण को विशेषता दिन्छ
यद्यपि अवधारणाले पहिले नै स्पष्ट पारेको छ कि हामी आर्थिक भूमण्डलीकरणबाट के संदर्भ गर्दैछौं, यो सत्य हो कि यस शब्दलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने केहि विशेषताहरू छन्। र यो त्यो हो:
शासित छ सम्पत्ति र स्रोतहरू मिलाउन सहमत हुने देशहरू बीच व्यवस्थित र स्थापित सन्धिहरूको आधारमा, हस्ताक्षर र तिनीहरूलाई लागू गर्दै। यी नि: शुल्क ट्रेड कागजातहरू, वा आर्थिक ब्लकहरू हुन्, जुन देशहरूको राम्रो कामको नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार छन्।
Se रोजगार सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, साथै समावेश देशहरूको अर्थव्यवस्था। यस अर्थमा, योग्य श्रम प्राप्त गर्न सक्षम हुनुको तथ्य, यदि यो उही देशमा छैन भने पनि, थप विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
को सामान र सेवाहरू आयात र निर्यात हुन्छन्। त्यो हो, ती उत्पादनहरू जुन एक देशसँग छैन, तर अर्कोसँग गर्छ, उनीहरूलाई आयात गर्न अझ बढी स्वतन्त्रता हुन सक्छ, र एकै समयमा उनीहरूसँग के छ र अरू देशहरूमा समान रूचि रहेको छ।
आर्थिक भूमण्डलीकरण हो व्यावहारिक रूपमा सारा विश्व मा उपस्थित छ। तर जहिले पनि विभिन्न सन्धि अन्तर्गत सहमत भएका (हस्ताक्षरकर्ता देशहरूको अनुसार)।
आर्थिक भूमण्डलीकरणको फाइदा र हानि
यस लेखको यस बिन्दुमा यो धेरै सम्भावना छ कि तपाईंसँग पहिले नै यो राम्रो वा नराम्रो छ कि आर्थिक भूमण्डलीकरण अवस्थित छ कि भनेर एक विचार थियो। र सत्य यो हो कि सबै चीजमा यससँग यसका राम्रा चीजहरू छन् र यसमा खराब चीजहरू छन्। तसर्थ, सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्दा, देशहरू यो देशको लागि राम्रो छ वा छैन भन्ने धेरै विश्लेषण गर्ने गर्छन्।
आर्थिक भूमण्डलीकरणका फाइदाहरू
आर्थिक भूमण्डलीकरणको बारेमा तपाईंलाई नाम दिन सक्ने सकरात्मक पक्षहरू मध्ये, हामीसँग:
औद्योगिक उत्पादन लागत खस्छ। किनभने त्यहाँ देशहरू बीच एक सम्बन्ध छ, उत्पादन लागत सस्तो हुन, औद्योगिक उत्पादन कम महँगो हुन अनुमति। यसले उत्पादनको अन्तिम मूल्यलाई पनि असर गर्छ, ताकि सामान र सेवाहरू अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा प्रस्ताव गर्न सकिए।
रोजगार बढाउनुहोस्। विशेष गरी ती देशहरूमा जसले श्रमको आवश्यकता पर्दछ, तर उनीहरूले आयात र निर्यात बढाउँछन् किनभने उनीहरूलाई कामका लागि श्रम चाहिन्छ।
कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा छ। यसलाई राम्रो चीजको रूपमा व्यवहार गर्न सकिन्छ, तर नराम्रा चीजको रूपमा पनि। र यो यो हो कि कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा सधैं राम्रो कुरा हो, किनकि यसले उत्पादन बढाउँदछ, उनीहरूमा सृजनात्मकतालाई प्रोत्साहित गर्दछ र राम्रो वस्तु र सेवाहरू प्रस्ताव गर्ने प्रयास गर्दछ। यद्यपि यो अर्थमा पनि खराब हुन सक्छ कि अधिक प्रतिस्पर्धाको साथ साना व्यवसायहरूको लागि ठूला व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अझ गाह्रो हुन्छ।
चाँडो उत्पादन गर्दा, सबै भन्दा माथि किनकि सबै टेक्नोलोजीहरू र आविष्कारहरू सबै देशहरूको सेवामा राखिएका छन् र यसका साथ सम्भव छ कि टेक्नोलोजीलाई अप्टिमाइज गर्न र सबैलाई समान दिशामा अगाडि बढाउनु, विश्वव्यापी विकास प्रबर्धनका साथै।
तर सबै कुरा राम्रो छैन, त्यहाँ धेरै नकारात्मक चीजहरू छन् जुन आर्थिक भूमण्डलीकरणले हामीलाई ल्याउँछ, जस्तै:
आर्थिक असमानता। यद्यपि हामीले भनेका छौं कि देशहरूले तिनीहरूको पक्षमा काम गर्छन् जसले गर्दा वस्तुहरू र सेवाहरू सबैको बीचमा व्यावसायिकिकरण हुन्छन्, यो स्पष्ट छ कि प्रत्येक देशको व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थाले विकासलाई प्रभावित गर्दछ, यसरी कि एउटा अर्थव्यवस्था र अर्को बीचको भिन्नताहरू छन्।
वातावरण प्रभावित छ। अधिक वा कम हदसम्म। यो किनभने उच्च उत्पादनको साथ, त्यहाँ अधिक प्रदूषण पनि हुनेछ, र त्यसैले यो वातावरणको हेरचाह गर्न नीतिहरू स्थापना गर्न यति महत्त्वपूर्ण छ।
उच्च बेरोजगारी। हो, यो हामीले विगतको कुरा भनेको भन्दा धेरै विवादास्पद हो भन्ने कुराको विरोधाभासपूर्ण छ। समस्या यो छ कि त्यहाँ मानव संसाधनको एक ठूलो मात्रा भएको छ, कम्पनीहरूले ती कामदारहरूलाई भेट्टाउनेछन जो अधिक किफायती छन्, र कार्यशक्तिले पनि त्यस्तै हुनेछ। यसले के स ?्केत गर्छ? ठिक छ, धेरै महँगो श्रम भएका देशहरूमा बेरोजगारी हुनेछ।
कम विकास। व्यापार अवसरहरू घटाएर (हामीले तपाईंलाई व्यवसाय प्रतिस्पर्धाको बारेमा के भनिरहेका थियौं) जसले देशको व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थालाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्छ।
त्यसो त भूमण्डलीकरण राम्रो छ कि नराम्रो?
तपाइँले सोध्नुभएको देशमा निर्भर गर्दै, यसले तपाइँलाई एक चीज वा अर्को बताउँदछ। तपाईंले देख्नु भएको छ, यससँग यसका राम्रा चीजहरू छन् र यति राम्रा चीजहरू छैनन, र यसले देशलाई व्यक्तिगत तवरले असर गर्दछ, या त यसलाई धनी बनाएर वा कम बनाएर।
तर ताकि यसलाई नोक्सानी नपुग्ने, त्यहाँ व्यापार सम्झौताहरू छन्। यी दुई पक्षीय हस्ताक्षर गरीन्छ, यदि तिनीहरू दुई देश बीच हो; वा बहुपक्षीय यदि यसले धेरै देशहरू समावेश गर्दछ। र ती स्थापना गर्दछ के निर्देशनहरू अनुसरण गर्न को लागी हो। प्रत्येक देशले यो कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा पहिले यसलाई मूल्याate्कन गर्न आवश्यक छ यदि यो जान्नको लागि कि यो उनीहरूको लागि के उपयुक्त छ वा छैन भने, यो पहिले जस्तै जारी राख्न उत्तम छ।
अर्को विकल्प प्रयोग भएको छ आर्थिक अवरोधहरू प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो हो कि नियमहरू जुन धेरै देशहरू बीच गरिन्छ केहि पक्षहरु को बारे मा आवश्यकताहरु को स्थापना गर्न: ट्यारिफ, आयातित उत्पादन, आदि।
आर्थिक भूमण्डलीकरण एकतर्फी पनि हुन सक्छ, उही देशमा, उदाहरणका लागि ट्यारिफ दरहरू विनियमन गरेर, आयात वा आयात गर्न आवश्यक उत्पादनहरू, इत्यादि। यसैले देशको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » आर्थिक राजनीति » आर्थिक भूमण्डलीकरण